Abɔfo kɔsraa Lot (1-11)
Wɔka kyerɛɛ Lot ne n’abusua sɛ womfi kurow no mu (12-22)
Wɔsɛee Sodom ne Gomora (23-29)
Lot yere dan nkyene siw (26)
Lot ne ne mma mmea ho asɛm (30-38)
Nea ɛyɛe a yebenyaa Moabfo ne Ammonfo (37, 38)
19 Abɔfo baanu no koduu Sodom anwummere, na na Lot te Sodom kurow no pon ano. Lot huu wɔn no, ɔsɔre kohyiaa wɔn de n’anim butuw fam.+ 2 Na ɔkae sɛ: “Me wuranom, mesrɛ mo, momman mmra mo akoa fi mmɛda ha anadwo yi na wɔnhohoro mo nan ho, na ade kye a moasɔre ntɛm atoa mo akwantu so.” Ɛnna wɔkae sɛ: “Daabi, yɛbɛda abɔnten anadwo yi.” 3 Nanso ɔne wɔn kae ara maa wɔne no kɔɔ fie. Na ɔtow wɔn pon; ɔtõõ paanoo a mmɔkaw* nnim maa wɔn, na wodii. 4 Wonnya nkɔɔ kɛtɛ so no, Sodom kurow no mu mmarima betwaa ofi no ho hyiae, efi mmarimaa so kosi nkwakoraa so, nnipa a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔɔ twi bae. 5 Na wɔteɛteɛm guu Lot so sɛ: “Mmarima a wɔbaa wo nkyɛn anadwo yi no wɔ he? Fa wɔn bra na yɛne wɔn nna.”+ 6 Ɛnna Lot pue kɔɔ wɔn nkyɛn wɔ ɔpon no ano, na ɔtoo pon no mu wɔ n’akyi. 7 Na ɔkae sɛ: “Me nuanom, mesrɛ mo, munnni amumɔyɛsɛm saa. 8 Mesrɛ mo, mewɔ mma mmea baanu a ɔbarima biara ne wɔn nnae da. Momma memfa wɔn mmrɛ mo na monyɛ wɔn nea mopɛ biara. Na mmarima yi de, mommfa mo nsa nnka wɔn, efisɛ wɔabɛhyɛ me nwini* ase.”+ 9 Ɛnna wɔkae sɛ: “Twe wo ho!” Na wɔtoaa so sɛ: “Ɔhɔho a ɔreba ha no na obiara nka ne ho yi na ɔrebebu yɛn atɛn? Nea yɛde rebɛyɛ wo koraa bɛkyɛn wɔn de.” Na wɔn nyinaa baa Lot so. Ná wɔpɛ sɛ wobu ɔpon no kɔ mu. 10 Enti mmarima a wɔwɔ ofi no mu no soo Lot mu twee no baa dan no mu, na wɔtoo pon no mu. 11 Na wɔmaa mmarima a wogyinagyina ɔpon no ano no ani furafurae, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, na wɔhwehwɛɛ ofi no ano kwan ara nso wɔanhu. 12 Afei mmarima no bisaa Lot sɛ: “Wowɔ obi ka wo ho wɔ ha? Sɛ w’ase, wo mma mmarima, wo mma mmea anaa wo busuani biara wɔ kurow yi mu a, yi wɔn fi ha! 13 Na yɛrebɛsɛe ha, efisɛ osũ ne nteɛm a wɔama aba no ano ayɛ den Yehowa anim,+ enti Yehowa asoma yɛn sɛ yɛmmɛsɛe kurow yi.” 14 Enti Lot fii adi ne ne nsenom a wɔrebɛware ne mma mmea no kɔkasae; ɔkae ara sɛ: “Monsɔre! Mumfi ha, efisɛ Yehowa rebɛsɛe kurow yi!” Nanso ne nsenom no faa no sɛ nea ɔreyi nsɛnkwaa.+ 15 Bere a ade reyɛ akye no, abɔfo no ani beree Lot so sɛ: “Sɔre! Fa wo yere ne wo mma mmea baanu a wɔwɔ ha no na wɔansɛe wo anka kurow a wɔn amumɔyɛ nti wɔrebɛsɛe wɔn no ho!”+ 16 Bere a ɔretwentwɛn ne nan ase no, Yehowa mmɔborɔhunu nti,+ mmarima no susoo ɔne ne yere ne ne mma mmea baanu no nsa de wɔn pue kɔɔ kurow no akyi.+ 17 Bere a wɔde wɔn duu kurow no akyi ara pɛ, wɔn mu baako kae sɛ: “Munguan mpere mo nkwa!* Monnhwɛ mo akyi+ na munnnyina ɔmantam+ yi mu baabiara! Munguan nkɔ bepɔw no so na wɔansɛe mo!” 18 Ɛnna Lot ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo, mma me nnkɔ hɔ! 19 W’akoa anya w’anim dom, na woregye me nkwa*+ de ada ayamye kɛse* adi akyerɛ me. Nanso mesrɛ wo, merentumi nguan nkɔ bepɔw so hɔ, efisɛ misuro sɛ anhwɛ a na asiane bi akosiane me ma mawu.+ 20 Kurow yi bɛn, na metumi aguan akɔ hɔ; ɛhɔ sua. Mesrɛ wo, ma minguan nkɔ hɔ na minnya nkwa;* ɛhɔ sua.” 21 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mate. Eyi mu nso mehu wo mmɔbɔ;+ merensɛe kurow a woaka ho asɛm no.+ 22 Yɛ ntɛm! Guan kɔ hɔ, efisɛ wunnuu hɔ a merenyɛ hwee!”+ Ɛno nti ɔtoo kurow no din Soar.*+ 23 Lot duu Soar no, na owia apue asaase no so. 24 Afei Yehowa maa sɔfe* ne ogya tɔ fii soro; efi Yehowa nkyɛn beguu Sodom ne Gomora so.+ 25 Enti ɔsɛee nkurow yi ne ɔmantam no nyinaa, ne nnipa a wɔwɔ nkurow no mu ne asaase no so afifide nyinaa.+ 26 Nanso Lot yere a na odi n’akyi no twaa n’ani hwɛɛ n’akyi, na ɔdan nkyene siw.+ 27 Ɛno akyi no, Abraham sɔree anɔpatutuutu kɔɔ faako a ogyinae ne Yehowa kasae no.+ 28 Bere a ɔmaa n’ani so hwɛɛ baabi a Sodom ne Gomora ne ɔmantam no nyinaa gu no, ɔnkɔhwɛ a, ewim na ayɛ wusiw kumɔnn te sɛ fononoo* mu wusiw yi!+ 29 Enti bere a Onyankopɔn resɛe nkurow a ɛwɔ ɔmantam no mu hɔ no, Onyankopɔn kaee Abraham, na ɔmaa Lot fii baabi a ɔte, nkurow a ɔsɛee no no mu.+ 30 Akyiri yi, Lot tu fii Soar na ɔne ne mma mmea no kɔtenaa bepɔw so,+ efisɛ na osuro sɛ ɔbɛtena Soar.+ Enti ɔne ne mma mmea baanu no kɔtenaa ɔbodan bi mu. 31 Na panyin no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ: “Yɛn papa abɔ akwakoraa na ɔbarima biara nni asaase yi so a ɔne yɛn bɛda sɛnea wɔyɛ wɔ asaase so baabiara no. 32 Bra na yɛmma yɛn papa nsã* nnom na yɛne no nna na yɛne no nwo mma.” 33 Enti saa anadwo no, wɔmaa wɔn papa nsã* pii nomee; ɛnna ɔpanyin no ne no kɔdae, nanso papa no anhu bere a ɔbɛdaa hɔ ne bere a ɔsɔree. 34 Ade kyee no, ɔpanyin no ka kyerɛɛ akumaa no sɛ: “Hwɛ, me ne me papa dae nnɛra anadwo. Ma yɛmma no nsã nnom anadwo yi nso na wo ne no nkɔda, na yɛne no nwo mma.” 35 Enti saa anadwo no nso wɔmaa wɔn papa nsa pii nomee; ɛnna akumaa no ne no kɔdae, nanso papa no anhu bere a ɔbɛdaa hɔ ne bere a ɔsɔree. 36 Enti Lot mma mmea baanu no ne wɔn papa nyinsɛnee. 37 Ɔpanyin no woo ɔbabarima na ɔtoo no din Moab.+ Ɔno ne Moabfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no agya.+ 38 Akumaa no nso woo ɔbabarima na ɔtoo no din Ben-Ami. Ɔno ne Ammonfo+ a wɔwɔ hɔ nnɛ no agya.
^ Anaa “m’ahobammɔ.”
^ Anaa “me kra nkwa.”
^ Anaa “me kra nnya nkwa.”
^ Ɛkyerɛ, “Ketewa.”